Barattoonni qormaata seenan wanti isaanirraa eeggamu: gaafilee qormaataa hanga danda’an hojjachu, korrochu irraa of qusachu fi naamusa qormaata kabajuudha. Haaluma kanaan, namoonni addunyaa tana keessatti qoraman wanti isaan irraa eeggamu: obsuu, shukrii (Rabbiif galata galchuu), wantoota itti ajajaman hojjachu fi wantoota irraa dhoowwaman dhiisudha. Qormaanni dhumarratti bu’aan isaa ni beekkama. Barataan qormaata seenee wanta isarraa eeggamu yoo hin hojjatin, bu’aa gaarii argachuu danda’aa? Haaluma kanaan, namoonni addunyaa tana keessatti qoraman, wanta isaan irraa eeggamu yoo hin hojjatin mindaa gaarii Rabbiin waadaa galee argachuu danda’uu? Ammas, baratan qormaata seene seera qormaataa cabsuun yoo korrojee fi jeequmsa uume, amala badaa isaa kanaaf ni adabama. Haaluma kanaan, namni addunyaa qormaata tana keessatti wanta Rabbiin dhoowwe hojjate ykn wanta Inni itti ajaje dhiise, ni adabama.